App ကို Lock ကိုတစ်ဦးသင့် privacy လုံခြုံရေးအတွက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလုံခြုံမှုကိုလျှောက်လွှာရှိရမည်ဖြစ်ပါသည်။ သင်၏ဖုန်း app တွေ၏ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲသုံးစွဲခြင်းမှကာကွယ်ရန်ရိုးရှင်းပြီးလုံခြုံလျှောက်လွှာ Locker ။ လွယ်ကူပြီးသန့်ရှင်းတဲ့ user interface ကိုသင်ရုံတစ်ခုတည်းclick.► Lock ကို Apps ကပနှင့်အတူမည်သည့် app ကိုသော့ခတ်ဖို့ခွင့်ပြု:
App ကို Lock ကိုထိုကဲ့သို့သောပြခန်း, Whatsapp, Facebook, Messenger ကို, Snapchat, Instagram ကို, ကို SMS, Contact, အီးမေးလ်များနှင့်သင်ရွေးချယ်မည်သည့် app ကိုအဖြစ်မဆို app ကိုသော့ခတ်နိုင်ပါ။ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခွင့်တားဆီးနှင့်သင့် privacy ကို.► Lock ကိုဖုန်း setting ကိုကာကွယ်ပေး:
တူသော setting သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုပြောင်းလဲခြင်းမှအခြားသူများအားတားဆီး ... Wi-Fi, Bluetooth စမိုဘိုင်းဒေတာနှင့် / Uninstall ကို Install လုပ်ပါ။ ပျောက်အခြားလူတို့ကတက် messed ခံရခြင်းမှသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုစောင့်ရှောက်ရန်။
► PIN နံပါတ်သို့မဟုတ်စံနမူနာ Lock ကိုတို့က Unlock:
ရွေးချယ်စရာသော့ဖွင့် PIN နံပါတ်နှင့်စံနမူနာ, နှစ်ဦးစလုံးအတွက်ရွေးချယ်စရာများလုံခြုံစွာဖြစ်ကြသည် App ကို Lock ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက် app များကိုသော့ဖွင့်ရန်သင့်အကြိုက်ဆုံးစတိုင်လ်ကိုရွေးချယ်ပါ။
► Password ကို Recovery ကို:
သငျသညျမေ့လျော့ကိစ္စတွင်အတွက် password ကို recover ရန်သင့်လုံခြုံရေးမေးခွန်းကိုသတ်မှတ်မည်။
ငါတို့ရှိသမျှသည်ဖုန်းကိုလုံခြုံရေးကြှနျုပျတို့အားလုံးများအတွက်ထိပ်တန်းဦးစားပေးဖြစ်လာသိရသည်။ ထို့အပြင်ပြုလုပ်တာစမတ်ဖုန်းအသုံးပြုသူများအတွက်မလိုအပ်, တစ်ခုခုက Android, iOS သို့မဟုတ်အခြား OS ကိုအခြေပြုကိရိယာဖြစ်သည်။ အဲဒီမှာဤမျှလောက်များစွာသော privacy ကို app များကိုရရှိနိုင်ပါသည်ပေမယ့်မေးခွန်းတစ်ခုကိုကောင်းမြတ်သောအရာသည်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ လုံခြုံရေး app တစ်ခုဓါတ်ပုံများ, ဗီဒီယိုများ, စာရွက်စာတမ်းများ, မက်ဆေ့ခ်ျ, ဆက်သွယ်ရန်, များပြားပိုပြီးများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၏ပုဂ္ဂလိကဒေတာ, ကာကွယ်ပေးပါသလား? ဤအရာရှိသမျှတို့ကိုဖို့ဖြေရှင်းချက်အဖြစ်, ဒီမှာအကောင်းဆုံး App ကို Lock ကို application ဖြစ်ပါတယ်, ငါတို့ Android အတွက်၎င်း၏ features တွေနဲ့လှည့်ကွက်ဖော်ပြရန်သွားနေကြသည်။
AppLock APK ကို၏အင်္ဂါရပ်များနှင့်အလှည့်ကွက်
အဆိုပါ App ကို Lock ကို APK ကိုဤနေရာတွင်ဤမျှလောက်များစွာသောကောင်းသော features တွေနှင့်အတူတက်နေတဲ့ထိုသူအချို့တို့သည်နေသောခေါင်းစဉ်:
ဒါဟာဓာတ်ပုံ Vault မှတဆင့်ရုပ်ပုံများကိုဖုံးကွယ်ထားနိုင်ပါတယ်။
ထိုသို့သော Password ကိုသော့ခတ်, လက်ဗွေသော့ခတ်နှင့်စံနမူနာသော့ခတ်အဖြစ်သော့ခတ်အဆောက်အဦးအမျိုးအစားသုံးမျိုးပေးနေပါသည်။
ဗီဒီယို Vault မှတဆင့်ဗီဒီယိုများ Hide ။
သော့ဖွင့အားလုံးနှင့်ဧည့်သည်နဲ့တူ default အနေနဲ့ profile များကိုအဘို့အင်္ဂါရပ်များ။
စိတ်ကြိုက် Profiles များအတွက်: သင်ကွဲပြားခြားနားသောသော့ချထားသော app ကိုအုပျစု ထား. , အလွယ်တကူသော့ခတ်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
အချိန် Lock ကိုချိန်ညှိမှုများ: သင်သည် Auto-သော့ခတ်စီမံခန့်ခွဲနှင့်သင့် preference ကိုနှင့်အချိန်အရသိရသည်သော့ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။
တည်နေရာ Lock ကိုဆက်တင်: Auto-သော့ခတ်နဲ့သော့ဖွင့်စက်ရုံတည်နေရာနှင့်အညီများနှင့်တစ်ဦးပြောင်းလဲတည်နေရာ၏အမှု၌။
သငျသညျကိုလညျး AppLock အိုင်ကွန်ဖုံးကွယ်နိုင်ပါတယ်။
အဆင့်မြင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအင်္ဂါရပ်: ဒါဟာတာဝန်လူသတ်သမားအားဖြင့် AppLock တားဆီးနိုင်ပါတယ်။
ကျပန်းကီးဘုတ်: အဆိုပါကျပန်းကီးဘုတ်ကူညီပေးသည်နှင့်သင့် pin ကိုကုဒ်ဝင်ရောက်ဖို့အခြားလူများတားဆီး။
ဒါဟာခွင့်ပြုချက်တောင်းပါလိမ့်မယ်နှင့်အခြား app တွေကို uninstall လုပ်တားဆီးပါလိမ့်မယ်။
ဒီ app အရွယ်အစားအလွန်သေးငယ်သည်, ဤအရပ်မှ, သင်သည်ဤ APK ကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်မယ့်ကြီးမားတဲ့အာကာသရှိသည်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။
လည်းပါဝါချွေတာရေး mode ကိုဒီသင့်ရဲ့ device ဘက်ထရီကိုကယ်တင်နိုင်ပါ။
Huawei နှင့် Xiaomi အသုံးပြုသူများအတွက်မှတ်ချက်:
Huawei နှင့် Xiaomi ထုတ်ကုန် App ကို Lock ကိုဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်ကြောင်းအလုပ်တစ်ခုကိုလူသတ်သမားန်ဆောင်မှုများရှိသည်။ စနစ်တကျ App ကို Lock ကိုအလုပ်စောင့်ရှောက်ရန်, သငျသညျသူတို့အား devices များ '' လုံခြုံရေးဆက်တင် app များကိုခွင့်ပြုမှ App ကို Lock ကိုထည့်သွင်းဖို့လိုပါတယ်။
ဟွာဝေး: ဖုန်းနံပါတ် Manager ကို App ကို> Protected Apps ကပ> စာရင်းထဲမှ App ကို Lock ကိုထည့်ပါ။
Xiaomi က: န်ဆောင်မှုများ> လုံခြုံရေး> ခွင့်ပြုချက်များ> Autostart, App ကို Lock ကိုရှာဖွေအော်တိုက start ကို enable ။
2.34 ကို MB
App ကို Lock ကို App ကို Lock ကို Apk Android အတွက် App ကို Lock ကို App ကို Lock ကို Download လုပ်ပါ Locker တွေ
သြဂုတ်လ 22, 2018 မှာ 1: 22 ညနေ
မတ်လ 16, 2019 မှာ 5: 20 ညနေ
ဘယ်သူမှ app ကိုသော့ခတ်ပေါ်မရနိုငျ
သောမတ်စ် Lockhart says:
ဇူလိုင်လ 25, 2018 မှာ 5: 04 ညနေ
ဇွန်လ 29, 2018 မှာ 12: 41 ညနေ
မေလ 26, 2019 မှာ 7: 59 နံနက်
မေလ 1, 2018 မှာ 2: 04 ညနေ
ဧပြီလ 1, 2018 မှာ 7: 03 နံနက်